𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 24/7 Tooth Balance (180 g) တစ်ဘူး - 7,500 Kyats (FDA No. MN200730718) 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - 19,000 Kyats (FDA No. MNA2107000318) 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - 20,500 Kyats (FDA No. MN201234582) 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 New Skiin Foam Cleanser (150 g) တစ်ဘူး - 10,000 Kyats (FDA No. MN200630407, MN200630408, MN200630409) 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 Snail Wish Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - 31,000 Kyats (FDA No. MN201234482) 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) မှ စတင်ပြီး ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ 🛑🛑🛑🛑 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။ 1. Snail Wish Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - 31,000 Kyats (FDA No. MN201234482) 2. New Skiin Foam Cleanser (150 g) တစ်ဘူး - 10,000 Kyats (FDA No. MN200630407, MN200630408, MN200630409) 3. New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - 19,000 Kyats (FDA No. MNA2107000318) 4. New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - 20,500 Kyats (FDA No. MN201234582) 5. 24/7 Tooth Balance (180 g) တစ်ဘူး - 7,500 Kyats (FDA No. MN200730718) 6. New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - 3,500 Kyats (FDA No. MN191023848) 7. New Skiin Whitening Selfie Face Mask (၅ချပ်ပါ တစ်ဘူး) - 15,000 Kyats (FDA No. MN191023849) 8. New Skiin Skin Reborn Solution (အလုံး၃၀ပါ တစ်ဘူး) - 20,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/069) 9. New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - 22,000 Kyats (FDA No. MN201234583) 10. Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး - 4,500 Kyats (FDA No. MN200428693) 11. Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 (အထုတ်သေး(၁၀)ထုတ်ပါ အထုတ်ကြီး(၁)ထုတ်) - 15,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/1716) 12. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (30 Sheets) တစ်ထုတ် - 5,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 13. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (100 Sheets) တစ်ထုတ် - 12,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 14. Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - 8,500 Kyats (FDA No. MN200529980, MN200529981, MN200529982, MN200529983, MN200529984) 15. Nano Brush တစ်ခု - 12,000 Kyats 16. Nano Spray တစ်ခု - 17,000 Kyats
𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 FOCUS Beauty မှ အောက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများကို 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) မှ စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ FOCUS Beauty Agent များအတွက်လဲ 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ Order များ ပေးပို့တဲ့အခါမှာလည်း သတ်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်း စျေးနှုန်းဇယားစာအုပ်အသစ်များကို အခမဲ့ထည့်သွင်းပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 🛑🛑🛑🛑🛑 ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော စျေးနှုန်းအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးရပါမည်ဖြစ်ပြီး 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။ 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 လ (𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟭) မှ စတင်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းများ 1. Snail Wish Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - 31,000 Kyats (FDA No. MN201234482) 2. New Skiin Foam Cleanser (150 g) တစ်ဘူး - 10,000 Kyats (FDA No. MN200630407, MN200630408, MN200630409) 3. New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - 19,000 Kyats (FDA No. MNA2107000318) 4. New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - 20,500 Kyats (FDA No. MN201234582) 5. 24/7 Tooth Balance (180 g) တစ်ဘူး - 7,500 Kyats (FDA No. MN200730718)
FOCUS Beauty မှ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းနေသော အောက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ 👉 Snail Wish Whitening Cream FDA No. MN190822680 👉 New Skiin All In One Tone Up Cream FDA No. MN191023848 👉 New Skiin Whitening Selfie Face Mask FDA No. MN191023849 👉 New Skiin Skin Reborn Solution FDA No. IR-F/2020-B1/069 👉 New Skiin Foam Cleanser Vitamin C FDA No. MN200630407 👉 New Skiin Foam Cleanser Salicylic Acid FDA No. MN200630408 👉 New Skiin Foam Cleanser Collagen FDA No. MN200630409 👉 New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream FDA No. MN201234582 👉 New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion FDA No. MN201234583 👉 New Skiin Brightening Exfoliation Toner FDA No. MNA2107000318 👉 24/7 Tooth Balance FDA No. MN200730718 👉 Better Skin Coffee Soap Scrub FDA No. MN200428693 👉 Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 FDA No. IR-F/2020-B1/1716 👉 Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue FDA No. MN200529979 👉 Ketchup Matte Liquid Lipstick 01 Chocolate FDA No. MN200529981 👉 Ketchup Matte Liquid Lipstick 02 Pasta FDA No. MN200529980 👉 Ketchup Matte Liquid Lipstick 03 Ketchup FDA No. MN200529982 👉 Ketchup Matte Liquid Lipstick 04 BBQ FDA No. MN200529983 👉 Ketchup Matte Liquid Lipstick 05 Burger FDA No. MN200529984
Ko Sai Thurein Than Swe
အရေပြား ဆဲလ်သေတွေကြောင့် ဒူးမည်း တံတောင်မည်း ဂျိုင်းကြားတွေ မည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား Focus Beauty ရဲ့ Product လေး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BS Better Skin Tamarind Turmeric Coffee Soap Scrub လေးနဲ့ Body Scrub လုပ်ကြည့် လိုက်ပါဗျ ဘယ်မှာ ရနိုင်မလည်း ဆို ကျွန်တော့်ဆီ မှာယူနိုင်ပါတယ် 09259344802 နေပြည်တော် ကိုယ်စားလှယ်